Weeraro ka dhacay Muqdisho - BBC Somali - Warar
Weeraro ka dhacay Muqdisho
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Abriil, 2013, 11:58 GMT 14:58 SGA
Qaraxa maxkamada Banaadir ee degmada Xamarweyne.
Ugu yaraan labaatan qof ayaa ku dhimatay laba weerar Muqdisho. Weerarka koowaad ayaa ka dhacay maxkamada gobolka Banaadir kadib markii ay soo weerareen maxkamada niman xiran waxyaabaha qarxa oo isqarxiyay, qaarna waxay rideen xabado.
Weerarka labaad ayaa ka dhacay jidka KM4 ee taga garoonka diyaaradaha. Laba shaqaalaha gargaarka ee Turkiga ayaa ka mid ah dadka ku dhintay.
Ammaanka magaalada ayaa aad loo adkeeyay, iyadoo weerarka uu saameeyay shaqooyinkii ka socday magaalada iyo maxkamada.